Miyuu jiraa qaylada digniinta iyo wadnaha Lumumba lagu tuuray murgeysi? Qaar ka mid ah dadku ma yaabaan haddii Congolese (afrikaanka) ay uxiraan inay ogaadaan sheekadooda? Miyuu Congolese ka xishoodnaa wakhtigoodii? Hase yeeshee, waa sheekadooda, waa inay ogaadaan
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 29, 2019 00: 50 No Comments
Waxay burburiyeen qaar ka mid ah asxaabteena, waxay gacan ka geysteen in ay khalkhal galiyaan runta iyo inay nijaaseeyaan madaxbannaanideena. Maxaa kale oo aan dhihi karaa ??
Hadday dhimato, ha noolaato, ama xor ha ahaato ama xabsi ha ku xirnaato amarada gumeystaha, shaqsiyan maahan shaqsiyadeyda. Waa Kongo, waa dadkeenna saboolka ah ee madaxbanaanida loo beddelay qafis kaas oo aan ka muuqanno la'aanteed, mararka qaar oo leh naxariis aan ikhtiyaari ah, mararka qaarkood farxad iyo raaxo, laakiin rumaysadahaygu weli waa mid aan la isku halleyn karin . (Patrice E. Lumumba).
Frantz Fanon's Qaybaha Waxbarashada ee QM: Dimoqraadiyada Congo iyo Istaraatiijiyada PE Lumumba, 1960 Years "Congo ee ku dagaallamaya madaxbannaanida, caqabadaha iyo istiraatiijiyadaha, Jilayaasha waawayn (Casharrada Taariikhda)"
Sep29 03: 02